VaMnangagwa Vanoburitsa Mazita eVanonzi Vakaburitsa Mari Kunze Zvisiri paMutemo
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vaburitsa gwaro rinoratidza makambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari yakawanda kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Gwaro raburitswa naVaMnangagwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari ine chitsama kunze kwenyika zvisiri pamurawu.
Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani aichera mangoda kwaChiadzwa anoti Anjin, Jinan, Canadile Miners pamwe neMarange Resources.
Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvizvarwa zvakawanda zvekuChina zvakaburitsawo mazakwatira emari zviri kunze kwemutemo.
Vachitaura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT, VaDouglas Mwonzora vati gwaro raburitswa naVaMnangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana nehuwori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Mutungamiri webato re Multiracial Christian Democrats, VaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvizvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kwehurongwa hwe Look East Policy hwaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano rinoona nezvehupfumi reZimbabwe Economics Society, VaLovemore Kadenge, vati mari iri kutaurwa kunzi yakabuditswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza hupfumi hwenyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano re Revolutionary Research Institute of Zimbabwe, VaTjenesani Ntungagwa, vati VaMnangagwa havafanire kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika.
VaMnangagwa vati vachatora matanho akawomarara kune vasina kudzosa yavakaburitsa kunze kwenyika vachiti ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji.